WOWOW I-Nickel eBhrashiweyo yitsalela itepu ekhitshini
Ikhaya / IFaucets yasekhitshini / Thatha iipompu zekhitshi / WOWOW Ibhulashi yeNickel yitsale iitephu zomxube wekhitshi
I-Wowow Broker iNickel Tsala iiMpompo zoMxube weKhitshi
Ukuxutywa kweTeki Yombhobho wasekhitshini bubungqina obuvuzayo bovavanyo oluninzi lokuvula nokuvala, ubungqina obuvuzayo bokuhlola okuninzi kunye nokuvala, ubungqina bokuqhuma kunye nobungqina obuvuzayo, ukusebenza okuzinzileyo, okuzinzileyo kwaye kugudile, kuqinile.
2310800 imiyalelo yokufaka
Tsala isitofu ekhitshini leKhitshi 2310800
Ngaba uyafuna ukubamba ikhitshi elikhethekileyo ekhitshini lakho ngephuli yokudonsa ekhitshini? Ke i-WOWOW ine-faucet ekhitshini esezantsi yakho, onokuthi ukwazi ukuzifaka ngokwayo kwiliso. I-Wowow yenze ukuba kube lula ukufakela oku kuthengiswa kwetephu ekhitshini. Kumanyathelo nje amathathu alula, unganika ikhitshi lakho ukuphakamisa okugqibeleleyo kunye nesiqwenga somdla sezixhobo zasekhitshini. Xa ufaka, okokuqala kwayo, uqinisa idonsa ekhitshini lasekhitshini ukuya ekhitshini lekhitshi lakho ngelensi yesinyithi. Okwesibini, uqhagamshela ibhola yomxhuzulane kumbhobho wamanzi ukuze ikhuphe phantsi inkohliso ukuze isebenze kakuhle kwaye ikhuphe ngokulula. Kwaye okwesithathu, uqhagamshela ii-hoses ezimbini zamanzi-zibanda kwaye zifudumele - kuqhagamshelo lwamanzi ekhitshini lakho.
Injalo ilula, kwaye kunye nemiyalelo ecacileyo kwaye zonke izinto ezifakiweyo zokufakelwa, awuyi kufuna ingcali ebiza imali enokubiza imali eninzi. Ukufaka kulula xa unedesika yasekhitshini enezinto ezili-1 okanye ezi-3 ezichazwe kwangaphambili. Ngevidiyo yendibano ye-WOWOW ungagqiba ukufakwa kwimizuzu engaphantsi kwe-30. Ngaba ayilunganga loo nto?
Imisebenzi yamanzi iyehlisa isitofu ekhitshini
Ngesixhobo sokurhweba sokuhambisa phantsi isitovu ekhitshini unikwa nge-3 endaweni yeendlela ezi-2 zamanzi. Okokuqala ungasebenzisa imo ye-flow mode ekulula ukuzalisa iimbiza ngamanzi umzekelo. Okwesibini, imo yoxinzelelo oluphezulu inikezela ngemo yokuhlamba ukucoca iindawo ezinkulu, umzekelo ukucoca iipleyiti. Kwaye okwesithathu, ubonelelwe ngemo yokutshayela ebonakalisa amandla angenamandla angakholelekiyo. Ngale ndlela yokutshayela ungatshayela ngokukhawuleza kwaye uhlambe isinki yakho ekhitshini. Yonke imdaka iyakususwa lula. Ngokuqinisekileyo iya kukuchukumisa. Intloko yesitshizi inezinto ezikumgangatho ophezulu we-ABS okhuseleko ngokunjalo kwaye iqinisekisiwe yi-NSF.
Iibhutsi ezakhelwe-ngaphakathi kule ndawo yokuhambisa isitofu ekhitshini ithintela ukutshiza kunye nokuvuza kwamanzi. Le bubble yetawuli ivelisa indawo ekhuselayo enciphisa amandla amanzi xa ihlasela ikhitshi lakho elisinki. Ngale bubble entsha, ukutshiza okucekeceke kuncitshiswa kungekho ngaphantsi kwe-90%. Kulula ukulawula ubushushu bamanzi kunye nomthamo wokuhamba kwamanzi nge-stainless yensimbi. I-lever yesinyithi egudileyo kwaye kulula ukuyisebenzisa, kwaye i-arc eyi-360- degree swivel spout ikunika ukufikelela okugcwele kokuhlamba. Ngaphandle koko, umbhobho wamanzi wenziwa ngentsimbi engenasiseko kwaye ke oko kuxhathisa kakhulu kumaqondo obushushu aphezulu. Umbhobho wokucoca inentloko yesitshizi yi-5'10 ”kwaye ibuyisela ngokulula emva emva kokusebenzisa nganye
Ukurhweba ukwehlisa isitofu ekhitshini
Oku kunciphisa isitofu ekhitshini kwakusenziwa ngenjongo yokusebenzisa ukuthengisa. Kwiindawo zentengiso, njengendawo yokutyela umzekelo, ibango liphezulu malunga nezixhobo zasekhitshini. Izixhobo kufuneka zikwazi ukumelana nako ukuze zikwazi ukuphatha usetyenziso olunzima kwaye ngaphandle kwayo kufuneka zibonise phantse nge-100% izinga lokusebenza. Ukonakalisa iitshisi zasekhitshini ezonakalisiweyo kungaphantse kube yintlekele. Ngesi sizathu, I-WOWOW isebenzise izinto ezininzi ezinganyangekiyo ukuze ikwazi ukuzenza kwiindawo ezinomngeni kakhulu. Yiloo nto uya kuthi uqaphele kwangoko xa unesihlahla sokuhambisa ikhitshi ezandleni zakho. Uziva esemgangathweni ngokukhawuleza.
Isiphuthi ekhitshini ekhitshini le-WOWOW senziwe nge-SUS 304 ngentsimbi engenasiphelo saza sagqitywa nge-nickel exineneyo. Le yintsimbi engenazimbane ayincomeki kwaye ayimiselanga magnethi ngokomzekelo wekhabhoni. Le yintsimbi engenazimba ihlala ixesha elide, inikezela ngokuchaseneyo ngakumbi kwaye iyamelana kakhulu nokulwa. Akukho khemikhali apho zisetyenziswe kolu hlobo lwensimbi engenasiseko olunokuhamba nokutya kwakho. Oku kwenza ukuba le phantsi isitofu sekhitshi seWOWOW sikhuseleke ngokupheleleyo impilo yakho kunye nokhetho olomeleleyo ekhitshini lakho.
Ukudepha intaba ukuhambisa isitovu ekhitshini
Ngaphandle kokuqina, ukusebenza kunye nokusebenza, ufuna ikiti yakho yaphantsi ekhitshini ukuba inike ifomati ekhitshini lakho. Ngokudonsa itephu ekhitshini leWOWOW uqinisekile ngale mpembelelo. Le nickel idreyini yaphantsi ikhitshi lasekhitshini inika uphuculo oluhle kuyo nayiphi na ikhitshi. Uyilo lwelo fekthi yasekhitshini ekhitshini inokubonwa njengendawo yakudala, eyamashishini okanye yanamhlanje. Olu loyilo lodwa lwenza kube lula ukudibanisa kunye neentlobo ezininzi zasekhitshini. Nokuba yeyiphi uyilo lwekhitshi onalo, ngesi sigqibo sezantsi ekhitshini uya kunika uphuculo olunomtsalane ekhitshini lakho. Kancinci, kodwa kuyachukumisa.
Njengoko lo wehlisa isitofu ekhitshini sigqunywe, siyakuba sisiseko somtsalane ekhitshini lakho. Njengeendawo zokugxila kwendalo, iikhitshi zasekhitshini ziqhele ukutsala umdla wokubona kwakho. Ngokukodwa, xa isitshixo sempahla yakho sele sibekiwe. Ngokuqinisekileyo, uya kunika umfanekiso obukekayo ngale ndlela yokudonsa ekhitshini ekhitshini. Hayi kwindawo yokugqibela ngenxa yokugqibezela kwayo okumnandi okugqityiweyo. Oku kunika ukubukeka okubonakalayo kuyo nayiphi na ifenitshala ekhitshini, kwaye kunye noyilo lwayo olwahlukileyo namhlanje, unayo loo faucet yasekhitshini ezandleni zakho eya kuthi yenze umahluko.
Tsala isiqinisekiso sokuphelisa ikhitshi ekhitshini
Ku-WOWOW sinomdla kwiimveliso zethu kwaye sifuna ukukunika okona kulungileyo. Njengoninzi oludiliza iikhitshi zasekhitshini zeWOWOW, unikwa ithuba lokuqinisekisa iminyaka emihlanu. Ukuba isitofu sakho sokuhlala phantsi ekhitshini asinakusebenza ngale ndlela ufuna ngayo, uya kubonelelwa ngepeni entsha ekhitshini kunye nekhitshi elingena endaweni yenye. Eso sisithembiso esisenzayo kubo bonke abathengi bethu. Ngaphandle kwento, i-WOWOW iye yaba luphawu lwamazwe ngamazwe eyaziwa ngokuba neefits zeekhitshi ezikumgangatho ophezulu ngamaxabiso afanelekileyo. Elona xabiso lilungileyo lemali uya kuyifumana eWOWOW xa kuziwa kwikhitshini lakho lasekhitshini.
Njengoko sikholelwa kwiimveliso zethu, I-WOWOW ikunika isiqinisekiso sokubuya semva kweentsuku ezingama-90. Ukuba awungekhe ubenomdla wokuncitshiswa kwetephu ekhitshini njengoko silindele ukuba ube, siya kukubuyisela ngokupheleleyo ngaphandle kwengxaki. Kananjalo eso sisithembiso esikwenza kuwe!
Izibonelelo zokuncothula isitofu ekhitshini ekhitshini:
Iimpawu zeendlela ezintathu zamanzi
Yenziwe ngentsimbi engenasici
Kulula ukuyifaka kwimizuzu engama-30
I-SKU: 2310800 iindidi: Thatha iipompu zekhitshi, IFaucets yasekhitshini tags: Ikhitshi lokuKhangela ekhitshini, Isandla esisodwa, spray